२०७७ मंसिर २८ गते १५:१९
धरान , २८ मंसिर । नेपाल आयल निगमले इन्धनको भाउ फेरि बढाएको छ । शनिवार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा एक रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा दुई रुपैयाँले मूल्य बढाएको छ । नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य १०८ रुपैयाँ पुगेको...
सुनको मूल्य स्थिर, भाउँँ कति ?
२०७७ मंसिर २८ गते १५:१७
काठमाडौं, २८ मंसिर । साताको पहिलो दिन आइतबार पनि सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। आइतबार सुनको मूल्य नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आइतबार सुनको मूल्य ९२ हजार ५ सय रूपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बिहीबार र शुक्रबार...
२०७७ मंसिर २५ गते १६:५५
काठमाडौं, २५ मंसिर । स्थानीय बजारमा आज पहेँलो धातुको मूल्य प्रतितोला रु ९०० ले ओरालो लागेको छ । आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९२ हजार ५०० तोकिएको छ । बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला रु ९३ हजार ४०० मा कारोवार भएको थियो । यस्तै...
सुन र चाँदीको मूल्य घट्याे, आज ताेलाकाे कति ?
२०७७ मंसिर २४ गते ११:५१
काठमाडौं, २४ मंसिर । मंगलबार एकै दिन एक हजार ५०० ले बढेको सुनको भाउ आज बुधबार घटेकाे छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला ७०० रूपैयाँले घटेको हो। आज छापावाल सुनको मूल्य ९३ हजार ४०० रूपैयाँ कायम छ। हिजो यसको मूल्य...
अझै बढ्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
२०७७ मंसिर १९ गते २०:४३
काठमाडौं , १९ मंसिर । नेपाली बजारमा सुनको मुल्य आज पनि रु ३ सयले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज शुक्रबारका लागि छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९२ हजार ९ सय कायम गरेको छ । हिजो बिहीबारको तुलनामा तोलामा ३ सयले बढेको हो...
आज पनि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, जान्नुहोस तोलाको कति पुग्यो ?
२०७७ मंसिर १८ गते १३:१०
काठमाडौं , १८ मंसिर । नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्य बढेको छ । आज सुन १ हजार ६ सयले बढेको हो । आज सुन ९२ हजार ६०० मा कारोबार भइरहेको छ । यो साताको पहिलो दिन आइतबार सुन ६ सयले घटेको थियो ।...
काठमाडौं, २१ पुस । अस्ट्रेलियामा एक नेपाली विद्यार्थीको डुबेर मृत्यु भएको छ । अस्ट्रेलियाको...
एजेन्सी, २ माघ । इन्डोनेशियाको सुलावेसी टापूमा स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहान ६ दशमलव २...